Otu esi Mitchelton-Scott bịara nwekwa nnukwu asọmpi n'ịnyịnya nwanyị | 1xbet
Onye ndu otu Dutch, Annemiek van Vleuten, agbagola ụzọ n’ihu isii nke nanị otu nnukwu njem ndị nwanyị mere na a ga-agbaghara ndị na-emegide ya maka iche na ọdịiche ahụ ga-akacha mma. Onye ya na ya na-eme egwuregwu Australia, Amanda Spratt, nọ ọdụ na ise dị njikere ịkwado ohere ọ bụla iji soro Van Vleuten ọzọ na podium.Tour de France: Sagan na-enwe mmeri ‘egwu’ dị ka Alaphilippe nọ na-acha odo odo Gụkwuo
< Ọ bụ ngosipụta dị egwu nke ike sitere na ndị otu egwuregwu bọọlụ ụmụ nwanyị kacha elu nke Australia, ọkachasị na-atụle na tupu afọ 2017, ọbụnadịghị mma ha ga-atụle ịchụso mmeri n’ozuzu ha.N’oge ahụ, ọ garaghị bụrụ ihe a na-agaghị echetụ n’echiche na ha ga-emebi afọ ndị ọchịchị Dutch nke Rabo-Liv na Boels Dolmans. -Lọ na-emeri ike? Agha mkpụrụ ahụ na 2016, otu afọ mgbe Mitchelton-Scott kwụsịrị Giro Rosa kpamkpam iji mee ka ndị otu otu tinye uche na nkwadebe Olympic. Ọ bụ mmegharị nke yiri ka ọ ga-enweta ụgwọ ọrụ maka Van Vleuten ka ọ na-akwụ ụgwọ n’ihu ọhịa ahụ yiri ka ọ na-enweta ọla edo na-agbanwe ndụ.Mana nnukwu ọghọm okirikiri ahụ pụtara na ọ ga – anọ n’ụlọ ọgwụ ebe ogwe ọkpụkpụ atọ na nkụji dakwasịrị ya.
Ọ bụ ajọ ihe ga-esi na ya pụta, mana ikiri ka Van Vleuten gbapụ n’elu ugwu ọ bụla n’ụwa tupu ọdịda ahụ kwenye onye isi na egwuregwu Mitchelton-Scott n’oge ahụ, Gene Bates, nwere ike ịbụ nnukwu njem onye mmeri n’etiti ndi otu ya. Nke a pụtara na oge eruola iso ndị otu ndị nwoke wee malite ịchọ ihe karịrị mmeri a.
Ka Van Vleuten na-agbake, ọrụ bidoro ngwa ngwa ịkwadebe ndị otu maka izizi mbụ ha na Giro Rosa. 2017. Ọsọ n’egwuregwu ahụ adịchaghị gara gara nke ọma maka Mitchelton-Scott ka Van Vleuten, olileanya ha ka gbachapụrụ agbachapụ, tụbara nnukwu oge n’oge ihe yiri ka ọ bụzighi ezi mgbe ha gbasachara ihe n’ọhịa.Ma odi nkpa igaghi akpọ ya ihe nlere nke oma na njedebe. Van Vleuten mechara daba n’ụzọ nke atọ n’ogo nke atọ na Spratt banyekwara n’amaghị ama, na-ewere nke ise. Mitchelton-Scott’s Amanda Spratt na Lucy Kennedy nke Facebook Twitter gbara ọkụ tupu ọkwa ise nke Giro Rosa. Foto: Luc Claessen / Getty Images
N’afọ sochirinụ, otu Mitchelton-Scott kwadebere nke ọma nke mụtara ihe site na mbọ mbụ ya wetara ike nke ndị otu Dutch wee kwụsịtụ. Ike Van Vleuten na-emeziwanye ikike ịrịgo na ike ikpe oge nyeere ya aka inwe mmeri n’akụkụ oke ihe karịrị nkeji anọ.Mmekorita ya bara uru n’ugwu, Spratt, sonyere ya na podium na atọ kwadoo ha.Ọ bụghị ihe ijuanya na Van Vleuten batara n’ọsọ nke afọ a dịka ọkacha mmasị doro anya, enweghị oke.
“N’ezie anyị batara na Giro nke a site na nrụgide dị mma,” Lucy Kennedy kwuru, onye gbara mbọ Mitchelton-Scott’s na-agbago ike mgbe onye na – agba Australia wee banye n’afọ gara aga. “Ndị otu a niile na-atụ anya na anyị na-aga imeri uwe mwụda pink ma chebe ya, nke pụtara na anyị ga-enwe ọmarịcha ụbọchị iri nke ịgba ọsọ.”
Ọ na-egosi Mitchelton-Scott ka emebere nke ọma ịnagide ekele maka nhazi ọkaibe, tinyere ngagharị ọzụzụ dị elu na June maka ndị otu egwuregwu nke ndị na-arị ugwu – Van Vleuten, Spratt na Kennedy.Ọ dị mma onye ọbịa agaala, ugbu a agbụrụ mmadụ na-amaliteElisa Longo Borghini nke Trek-Segafredo
Na ule nnwale nke mbụ maka ndị na – ebenye ndị mmadụ n’ọkwa na Fraịde ise, atụmatụ ha rụzuru nke ọma. Nedgba ọsọ Kennedy n’ihu nyere aka gbochie peloton nke mbụ ịrị elu ahụ, Spratt nọdụrụ na oche nke ndị iro Van Vleuten ka onye otu otu bidoro mwakpo dị egwu na ntọala nke ngwụcha ngwụcha.Zọ ya pụtara na ndị ya na ha na-agba mgba nwere obere nhọrọ ma ọ bụ ikiri ka nwanyị Dutch nwanyị na-agba ka ọ bụrụ mmeri.
Isatali ọkacha mmasị Elisa Longo Borghini nke Trek-Segafredo.
Site na mbugharị ahụ na 10km iji gaa, Van Vleuten mepụtara oghere nke ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ nkeji atọ, nke nyere ya onye isi agbụrụ pink ahụ na obere nkeji abụọ na 16-nke abụọ na-azụta onye na-eso ya ọgụ na nhazi ọkwa.Na nzụkọ Wenezde nke isii egwuregwu nke otu egwuregwu ụwa were mmeri n’ọsọ asọmpi megide elekere wee gbaga n’ihu. ” jide onye na-anya ụdị njem ahụ tupu njem ya agwụ na Sọnde.
“Emechara m usoro nke a ka m mara ihe na-abịa, ọ dịghịkwa mfe, ọkachasị ụbọchị atọ na-esote, mana ndị otu m nọ siri ike, ”ka Van Vleuten kwuru na ọkwa isii. “Amanda Spratt na Lucy Kennedy bụ ndị gbasiri ike n’ezie ma enwekwara m injin atọ maka ụlọ ahụ, enwere m obi ike na anyị nwere ike ime nke a.”